Yekushandisa Kesi - Weibo Magetsi Co, Ltd.
Nyaya Yekushandisa - Kambani Yekutaura
Weibo Magetsi yakagadzira matatu-chikamu simba rakazara rinotarisisa module, mizhinji-yedunhu njanji mhando simba mita uye leakage yazvino sensor yekutarisa kwemagetsi kwemidziyo yemagetsi emidziyo yekuongorora, kutonhodza mweya midziyo yekutarisa, kudzivirira simba rekutaurirana, bhatiri kuongorora uye manejimendi masisitimu. . Akateedzana emagetsi akazvitsaurira ekuzviparadzanisa maseru, senge horo mhedzisiro sensors, AC transmitter sensors uye bhatiri yemukati yekudzivirira maseru, akagadzirwa nekuvimbika kwakanyanya, kukwirira kwakaringana, kwakanyanya kusarudzika, yakafara frequency mhinduro uye yakafara tembiricha renji kuburikidza neakanyanya kusimbiswa EMC uye kudzivirira kwemheni. Kuderera kwesimba kushandiswa uye zvimwe zvinhu zvinovimbisa kuvimbika kweiyo telecommunication system.
Kambani yekutaurisa kunyorera
Simba renharaunda kure kure yekutarisa system
Base chiteshi chemakomputa kamuri simba rekushandisa kuongorora system
Kutaurirana magetsi, UPS
Bhatiri yekutarisa manejimendi system
Nekukurumidza kukura kweChina yekuchengetedza mvura uye maindasitiri emagetsi emagetsi, kunyanya kuitwa kweNational South-to-North Water Diversion Project, zvinodiwa kuti "otaridze otomatiki kune vasina kuchengetwa, vashoma vanhu vari pabasa" uye kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwenzvimbo dzekuchengetedza mvura zvakare kuwedzera.
Iyo yechinyakare chitakuriso yekutarisa inoshandisa iyo yekuremerwa yekumanikidza sensor kuyera zvakananga kudhonza / kumanikidza kuti uone kudzoreredza kudzivirirwa kwemotokari mutoro. Iyi nzira haina kuoma chete kuisa nekuchengetedza, asi zvakanyanya kukosha, chinhu chepakati chechimiro cherudzi urwu rwe- sensor - kumanikidza Kunzwisisa zvinhu zvinonyanya kukanganiswa nekukanganisika kwezvakatipoteredza senge kutsauka kunokonzerwa netembiricha yekunze, kukuvara kunokonzerwa nekudengenyeka, uye kuchembera kwe namira rukoko kunokonzerwa refu kushandiswa nguva. Uye zvakare, nekuti huwandu hwesimba hunoyerwa nemidziyo yekushandisa iri yakaenzana, iko kurongeka kweiyo chaiyo yekuyera chiyero mhando yakaderera, uye zvinonetsa kusangana nezvinodiwa zvekushandisa mumunda.
Nyaya Yekushandisa - Inonzwisisika Remote Yekutarisa Sisitimu YePumping Unit Zvakanaka
Nekuvandudzwa kwetekinoroji yekudzora tekinoroji, isina waya kure kudzora telemetry system yave ichishandiswawo zvakanyanya mumatsime emafuta epamba. Iwo makuru sensors anotsanangurwa muchidimbu pazasi:
1.Pombi yekupomha tsime simba rekutarisa (matatu-chikamu magetsi uye zvazvino kuiswa, RS485 kuburitsa)
Iyo yakasarudzika yemubatanidzwa paramende yakangwara sensor yakagadzirirwa chaizvo kupomba matsime kutsiva analogog transmitters. Chiratidzo chekucherechedza ndeye AC 3-phase voltage uye 3-phase yazvino; zvinoburitswa zvirimo i3 voltage (inoshanda kukosha), 3 yazvino (inoshanda kukosha), simba rinoshanda, simba rinoshanda, simba chinhu, simba rinoshanda, uye simba rinoshanda uye frequency data. Izvo zvinoburitswa zvinogona kuwana iyo yakaenzana kukosha kweinodiwa magetsi paramende nhamba kubva kune yekutaurirana interface, uye haidi kuti RTU iite AC sampling.
2.Dedicated yakagadzika mutoro sensor (renji: 0 ~ 150kN; kubuda kwekunzwa: 1mVV)
Mushure memakore anopfuura gumi ekushandisa mumugodhi wekugadzira mafuta, inogara ichivandudzwa; yakanyatsoiswa chisimbiso uye dhizaini isina mvura yekusangana neese-ekunze kushandiswa; optimized plugs yekuvandudza kuvimbika; nyore uye yakachengeteka mashandiro; kuenderana kuburitsa uye kuzadzikiswa kwakazara.
3.Kudzvinyirira sensor (renji: kubva ku0 ~ 10Kpa kuenda ku0 ~ 500Mpa, kuburitsa: yakajairwa maviri-waya system)
Ichi chigadzirwa chinoshandisa iyo yekunze mafuta-izere kusarudzika chinhu kana iyo yese isina simbi strain-inokurudzira muviri kusanganisa yakasimba-nyika kusangana maitiro neyakavharirwa diaphragm tekinoroji. Iyo yekupararira yesilicon chip yakaiswa mune ye cylindrical mhango yakazadzwa nesilicone mafuta, kuburikidza nesimbi isina tsvina diaphragm uye Iyo yekunze casing inozviparadzanisa nayo kubva kuyera yepakati. Chigadzirwa chinogona kushanda munzvimbo dzakaomarara.
4.Angular yekumhanyisa sensor (renji: 0 ~ 100, 0 ~ 180, 0 ~ 270, 0 ~ 340 [inoenderera] kuburitsa 0-5V)
Ichi chigadzirwa inzwa yekuyera kutenderera chinzvimbo chechinhu chine hukama hwakaenzana pakati pemagetsi kubuda uye shaft kutenderera kona. Iyo inoratidzirwa nekukwirira chaiko, hupenyu hwakareba, yakanaka kuburitsa kutsetseka uye zvichingodaro.
5.Tembiricha yekupisa (tembiricha yemusoro wepamusoro PT1000 kuramba kubuda)
Yakatengwa PT1000 package; kunofambira mberi kumanikidza kurwisa kwakakura kupfuura 30Mpa; tembiricha yekupindura nguva inokurumidza; sensor chimiro inogona kutemerwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi; kushanda tembiricha: -50 ° C ~ +400 ° C, rakaringana giredhi A.
6.Infrared huviri kutarisa (matatu monitors alarm alarm)
Iyo yepamusoro-yekuita mbiri-hwindo detector ine tekinoroji yepamusoro mune yanhasi chengetedzo munda ine tenzi-muranda vaviri-boka rakakwira-rakanyatsoita infrared yekuona mudziyo uye anti-kupenya wedunhu uye isina kujeka logic yedhijitari.